Ciidamadii Ethiopian-ka ahaa oo ka baxay magalaada Beledweyn. [Akhris …] – Radio Daljir
Agoosto 31, 2009 12:00 b 0
Beledweyn, Aug 31 – Ciidamadii Ethiopian-ka ahaa oo dhawaan soo galay magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa lagu soo warramayaa in ay halkaasi dib uga laabteen.
Ciidamadaan oo markii hore fariisimo ku meel gaar ah ka samaystay xaafado ka mid ah bari magaalada Beledweyn, ayaa halkaasi ka guuray kadib markii ay deegaankaasi ku sugnaayeen muddo ka badan 24 saacadood.
Dadka deegaanka oo ay idaacadda Daljir la xiriirtay saakay, ayaa sheegay in ay arkeen sifooyin muuqda oo lagu garan karo dib u laabashada ciidanka Ethiopian-ka ahaa kuwaasi oo ay ka mid yihiin goobihii ay deganaayeen oo bannaan iyo tusaalayaal kale oo caddaynaya in ay u ay u jahaysteen dhanka Ethiopia.
Warar kuwaasi ka madax-bannaan ayaa iyana sheegaya in ay ka aag-badasheen halkii ay markii hore deganaayeen laakiin aysan jirin laabasho rasmi ah oo ay ku aadeen deegaanadii markii hore ay ka soo kicitimeen, waxaana warkaasi uu intaasi ku sii darayaa in ay suurto gal tahay fariisimo in ay ka samaystaan duleedka fog ee bariga magaalada Beledweyn.
Sikastaba ha?ahaatee, arrinta ciidamadaasi ayaa si weyn la iskula dhaxmarayaa ,iyadoo soo laabashadoodu ay walwal badan ku abuurtay in badan oo ka mid ah bulshada gobolkaasi.
Ciidamada Ethiopia waxay dalka ka baxeen dabayaaqadii sanadkii 2008, iyadoo loo aanaynayo imaanshahooda is afgaran-waaga siyaasadeed ee Soomaalida ka dhax-taan iyo dhanaca kala iyadoo cabsi ka qabta xooggaga islaamiyiinta ah ee isku fidinaya meel badan oo dalka ah.